Coumadin vs. हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Coumadin vs. हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
एन्टिकोएगुलेशन थेरापीले गम्भीर अवस्थाहरू जस्तै एट्रियल फाइब्रिलेशन, शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिजम, र मेकानिकल हार्ट भल्भ प्लेसमेन्टको प्रबन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एन्टीकोआगुलेन्ट औषधीहरू कौमाडिन र हेपेरिनले रगतको थक्काको गठनलाई व्यवस्थित गर्न र रोक्न मद्दत गर्दछ जुन यी अवस्थामा घातक हुन सक्छ।
क्लोट गठनको लागि मार्गमा भिटामिन के एक मुख्य घटक हो। यो सक्रिय थक्ने कारक II, VII, IX, र X को संश्लेषणमा आवश्यक छ। एक पटक यो रगत जमाउने कारकको संश्लेषणमा प्रयोग भएपछि, भिटामिन K निष्क्रिय हुन्छ र भिटामिन K epoxide Redctase जटिल १ (VKORC1) द्वारा पुनः सक्रिय गर्नुपर्दछ। क्लट गठन प्रक्रियामा भाग लिन जारी राख्नको लागि। Coumadin VKOR जटिल को एक घटक रोक्छ र यसैले शरीरमा भिटामिन K को ह्रास गर्न योगदान गर्दछ, जसले शरीरको क्लोटहरू बनाउने क्षमतालाई ढिला बनाउँछ।
हेपेरिनले प्रोटीन एन्टिथ्रोम्बिन III लाई बाँधेर कार्य गर्दछ जुन पछि थ्रोम्बिन र अन्य थक्के कारकहरूलाई सक्रिय पार्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक Xa। यी चरणहरूले फाइब्रिनोजेनलाई फाइब्रिनमा रूपान्तरण गर्न रोक्छ, जो थक्की गठनको लागि महत्वपूर्ण चरण हो। फाइब्रिनको गठनलाई ढिलो गरेर, हेपरिनले शरीरमा थक्काको गठन कम गर्दछ।
कौमाडिन र हेपेरिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
कुमाडिन एक औषधि हो जुन सामान्यतया यसको जेनेरिक नाम, वारफेरिन, वा कहिलेकाँही जान्टोभनले सन्दर्भ गरिन्छ। यो एट्रियल फाइब्रिलेशन, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, र शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिस्म जस्ता अवस्थामा रगतको थक्काको गठन रोक्न प्रयोग गरिन्छ। यो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ विभिन्न ट्याब्लेटमा प्रति गोली ट्याब्लेटमा १mg देखि १०mg सम्म। कुमाडिनमा हुँदा, बिरामीले नियमित प्रोथ्रोम्बिन परीक्षणहरू (PT) पेश गर्नु पर्दछ जब एक बिरामीको खुराक चिकित्सीय रूपमा उपयुक्त छ कि भनेर निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य अनुपात (INR) को रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ। वारफेरिन सामान्यतया बिरामीहरुमा months महिना भन्दा कम उमेरकाको बिषयमा प्रशासनिक मुद्दाहरूको कारण र अन्वेषित आनुवंशिक कारकहरूको सम्भावनाको कारण प्रयोग गर्न सकिदैन जसले संवेदनशीलतालाई असर गर्न सक्छ।
हेपरिन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन प्राय जसो इनसेन्ट सेटिंग्समा प्रयोग गरिन्छ। यो गहिरा शिरापरक थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिजम, र एट्रियल फाइब्रिलेशन जस्ता अवस्थामा रगतको थक्काको गठन रोक्न प्रयोग गरिन्छ। मुटु र रक्तवाहिकाहरू सम्बन्धी प्रक्रियाको क्रममा थक्की गठन रोक्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। हेपेरिन बिभिन्न ईन्जेक्सन र ईफ्युसनहरूको लागि विभिन्न समाधान फारमहरूमा उपलब्ध छ। त्यहाँ हेपेरिनको एक विशिष्ट फार्म्युलेसन केवल रेखा भित्र फुस्रो बनाउनको लागि इन्ट्रावेनस लाईन फ्लशिंगको लागि मात्र हो। यसलाई हेपेरिन लक फ्ल्याश भनिन्छ, र यो सुत्र अरू कुनै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हेपेरिन कुनै पनि उमेरका बिरामीहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर घनिष्ट अनुगमन आवश्यक छ।
Coumadin र हेपेरिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टिकोआगुलेन्ट एन्टिकोआगुलेन्ट
ब्रान्ड नाम के हो? वारफेरिन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट (बहु शक्तिहरू) इंजेक्शन वा निषेधको लागि समाधान (बहु एकाग्रताहरू उपलब्ध)
मानक खुराक के हो? धेरै बिरामीहरू दैनिक mg मिग्रिमा सुरू हुन्छन्, तर मर्मत खुराक प्रत्येक बिरामीको आईएनआरमा निर्भर हुन्छ औसत वयस्क बिरामीले 5,000,००० युनिटहरूको लोडि dose्ग डोज प्राप्त गर्दछ त्यसपछि २०,००० देखि ,000०,००० एकाइ २ 24 घण्टा निरन्तर जलसेकमा प्राप्त गर्दछ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? न्यूनतम months महिना, तर संकेतमा निर्भर अनिश्चित हुन सक्छ सामान्यतया केहि दिनहरू, एक हप्ता सम्म
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्कहरू
शर्तहरू कौमाडिन र हेपेरिन द्वारा उपचार
कौमाडिन शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिजम र पल्मोनरी एम्बोलिजम रोक्न र उपचार गर्नका साथै एट्रियल फाइब्रिलेशन र मेकानिकल भल्भ प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध कोगुलेसन जटिलताहरूलाई रोक्न र उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। कौमाडिन को जमाव सम्बन्धी जटिलताहरू रोक्न पनि प्रयोग गरिन्छ जुन मायोकार्डियल इन्फेक्शन वा हार्ट अट्याक पछ्याउन सक्छ।
हेपेरिन पनि शिरापरक थ्रोम्बोइम्बोलिजम र पल्मोनरी एम्बोलिजम रोक्न र यसको उपचार गर्न प्रयोग गर्दछ, साथै एट्रियल फाइब्रिलेशनसँग सम्बन्धित कोगुगुलेसन जटिलताहरूलाई पनि। थप रूपमा, हेपेरिनलाई कार्डियोभास्कुलर शल्यक्रिया, रक्तक्षेपण, र डायलिसिस प्रक्रियाहरूमा जमावट रोक्न प्रयोग गरिन्छ।
सर्त Coumadin हेपेरिन
भेनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म हो हो
पल्मोनरी एम्बोलिजम हो हो
एट्रियल फाइब्रिलेशन हो हो
मेकानिकल भल्भ प्रतिस्थापन हो हो
थप्नेसँग सम्बन्धित पोस्ट-मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन जटिलताहरू हो हैन
पर्कुटेनियस कोरोनरी हस्तक्षेप (एंजियोप्लास्टी) हैन हो
रक्तक्षेपण हैन हो
डायलिसिस हैन हो
के कुमाडिन वा हेपेरिन बढी प्रभावकारी छ?
कौमाडिन र हेपेरिनमा भिन्नता हुन्छ जसले उनीहरूलाई चिकित्सामा महत्वपूर्ण स्थान दिन्छ, प्राय: एउटै बिरामीमा।
आधा जीवनको उन्मूलन र शिखर एकाग्रताको लागि समय प्रत्येक औषधी कसरी र कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने निर्धारणमा दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्लिनिकल कारकहरू हुन्। लगभग hours घण्टाको एक आधा जीवनको उन्मूलनको साथ, कमान्डिन एकल खुराकबाट लगभग hours घण्टामा शिखर प्लाज्मा स्तरमा पुग्छ। धेरै कारणहरूले प्रत्येक बिरामीसँग फरक हुन सक्ने कारणले, उपचारात्मक INR मा पुग्न दिनहरू हप्ता लाग्न सक्दछ। हेपेरिन २-4घण्टामा चरम प्लाज्मा सांद्रतामा पुग्छ, लगभग about०-90 ० मिनेटको आधा जीवनको साथ।
को दिशाहरु डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी) को व्यवस्थापन र धेरै बिरामी प्रकारका लागि फुफ्फुसीय एम्बोलिजमले यसको छिटो सुरु हुने कारण हेपरिनको प्रारम्भिक प्रयोगको सिफारिश गर्दछ। उपचारात्मक प्रभावकारिता मर्मत खुराकसँगै लोडि maintenance डोज प्रशासित गरेर हासिल गरिन्छ। यो जारी रहन्छ जबकि कौमाडिन थेरापी शुरू गरिएको छ, र बिरामीको आईएनआर चिकित्सीय नभएसम्म। यसले -10-१० दिन लिन सक्दछ। हेपेरिनलाई सामान्यतया एक inha pantant सेटि managedमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुन्छ, तर बिरामीहरू कुमाडिनमा परिवर्तन भए पछि घर जान सक्दछन्।
केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्छन् कुन उपचार, वा चिकित्साको संयोजन, प्रत्येक बिरामीको लागि उपयुक्त छ। प्रदायकहरूले धेरै बिरामी-विशेष कारकहरू ध्यानमा राख्नुपर्दछ, जस्तै थप्पड घटनाहरूको इतिहास, उमेर, अघिल्लो उपचार, र सर्तहरूको ईतिहास जस्तै हेपेरिन-प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
कभरेज बनाम हेपेरिनको कभरेज र लागत तुलना
अधिकांश मेडिकेयर र वाणिज्य बीमा योजनाहरू कौमाडिन र / वा यसको जेनेरिक संस्करण वारफेरिनलाई समाहित गर्दछ। कुमाडिनको औसत खुद्रा लागत $ $० देखि १ dollars० डलरसम्म हुन सक्छ। तपाईं सिंगलकेयर कूपनको साथ करीव १० डलरको लागि वारफेरिन लिन सक्नुहुन्छ।
हेपेरिन प्राय: अस्पताल सेटिंग्समा दिइन्छ र प्राय: अन्तर्गत आउँदछ मेडिकेयर भाग बी । गैर मेडिकेयर बिरामीहरूको लागि यो चिकित्सा बीमाले ढाक्छ जब उचित र आवश्यक मानिन्छ। एक बिरामीको पकेट लागत भन्दा बाहिरको धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ कि उनीहरूले आफ्नो घटाउन योग्य पूरा गरेका छन् वा यदि उनीहरूसँग पूरक कभरेज छ। यदि बिरामीले पत्ता लगायो कि उनीहरूको हेपेरिन कभर गरिएको छैन भने तिनीहरूले कुपन डाउनलोड गर्न सक्छन् र प्रिस्क्रिप्शनको लागि $ $ as सम्म कम तिर्न सक्छन्।
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? हो हो, भाग बी
मानक खुराक ,०, mg मिलीग्राम खुराक २ m मिलि, unit००० एकाई / मि.लि.
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे फरक हुन्छ फरक हुन्छ
एकलकेयर लागत $ - $ १। $ 45- $ 65
कोमाडिन र हेपेरिनको साझा साइड इफेक्टहरू
सब भन्दा साधारण साइड इफेक्ट दुबै कोमाडिन र हेपेरिन हेमरेज वा गम्भीर रक्तस्राव हो। रक्तस्रावका केहि लक्षणहरू बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ, तर केहि थप स्पष्ट संकेतहरूमा सजीलो चोट, नाकबिर, गममा खून, ब्राउन वा रस्ट रंगको मूत्र र आँखामा रगत समावेश छ। यदि बिरामी रक्तस्राव गर्न कटिबद्ध छ भने, यो अस्थायी हो वा लामो अवधिको लागि, ड्रगबाट फिर्ता लिन आवश्यक छ।
हेपेरिन-प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (एचआईटी) हेपेरिन दिइएका बिरामीहरूको १-२% रिपोर्ट गरिएको छ। प्लेटलेट गणनामा यो गम्भीर गिरावटले टिश्यु नेक्रोसिस र ग्याग्रीन जस्ता गम्भीर जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ।
कसरी perioral dermatitis बाट छुटकारा पाउन
कुमाडिन वा हेपेरिनको उपचारबाट अन्य जटिलताहरू र गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन्। एक चिकित्सक वा फार्मासिष्टले साइड इफेक्टको पूर्ण सूची प्रदान गर्न सक्दछ।
रक्तस्राव हो १-१०% हो १-१०%
ग्याग्रीन / छाला नेक्रोसिस हो <1% हो <1%
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हैन हो ≤30%
HIT हैन हो १-२%
यो प्रतिकूल घटनाहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। पूर्ण सूचीका लागि कृपया डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
स्रोत: डेलीमेड ( Coumadin ), डेलीमेड ( हेपेरिन )।
कौमाडिन बनाम हेपेरिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
कुमाडिन साइटोक्रोम पी 5050० एन्जाइमहरू द्वारा मेटाबोलिज हुन्छ, मुख्यतया सबटाइप २ सी,, १ ए २, र A ए।। यी एन्जाइमका अवरोधकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा कुमाडिन स्तर बढाउँछन्, त्यसकारण बिरामीको आईएनआर बढाउँदै र रक्तस्रावको जोखिम बढाउँदछ। यी एन्जाइम अवरोधकर्ताहरूका उदाहरणहरूमा फ्लुकोनाजोल, र लोकप्रिय कोलेस्ट्रोल औषधि, एटोरभास्टाटिन जस्ता एन्टिफंगलहरू समावेश छन्। एन्जाइम इन्डुसेसरहरूले कुमाडिनको स्तर कम गर्नेछ, सम्भावित रूपमा बिरामीको INR subtherapeutic बनाउँदछ र थ्रोम्बोटिक घटनाको पीछा बढाउँदछ। एन्जाइम इन्डुसेसरहरूको उदाहरणहरूमा एन्टी-जप्ती औषधीहरू कार्बामाजेपाइन र फिनोबार्बिटल समावेश छन्।
हेपेरिनको प्रभावहरू एन्टीप्लेटलेट औषधिहरू जस्तै NSAIDs द्वारा सम्भावित हुन सक्छ। इबुप्रोफेन एक उदाहरण हुनेछ। हेपेरिनको प्रभाव डक्सीसाइक्लिन जस्ता सामान्य एन्टिबायोटिकसँग अन्तरक्रिया गरेर कम गर्न सकिन्छ।
निम्नलिखित तालिका अन्तर्क्रियाको सम्पूर्ण समावेशी सूची हैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रत्येक अन्तर्क्रियामा अधिक व्यापक सूची र अतिरिक्त जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ।
औषधि ड्रग क्लास Coumadin हेपेरिन
प्रोफेफेनोन एन्टिरिथ्यामिक हो हैन
भोरिकोनाजोल एंटी-फंगल हो हैन
कार्बामाजेपाइन एन्टिकोनवल्सेन्ट हो हैन
रानिटिडाइन एन्ट्यासिडहरू हो हैन
नोर्फ्लोक्सासिन फ्लुरोक्विनलोन एन्टिबायोटिक हो हैन
टेलिथ्रोमाइसिन म्याकोराइड एन्टिबायोटिक हो हैन
Minocycline टेट्रासाइक्लिन एन्टिबायोटिक हैन हो
सिम्वास्टाटिन एचएमजी को-ए रिडक्टेस इनहिबिटरहरू (स्टेटिन) हो हैन
एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिन संयोजनहरू मौखिक गर्भ निरोधक हो हो
एडोक्सबान रगत पातलो हैन हो
नेप्रोक्सेन NSAID हो हो
मेलोक्सिक्याम कोक्स द्वितीय अवरोधक हो हो
Coumadin र हेपेरिनको चेतावनी
Coumadin र हेपेरिन प्रत्येक एक रक्तस्राव घटना को घटना बढाउन सक्छ। केहि ड्रग्सले यो हुने सम्भावना बढाउन सक्छ। कोमाडिनमा बिरामीहरूले आफ्नो आईएनआर नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्दछ। भिटामिन के को अधिक सेवन, धेरै हरिया पातदार तरकारीहरु मा समावेश निहित, Coumadin को प्रभावकारिता कम गर्न सक्छ। बिरामीहरूले उपचारात्मक INR लाई कायम राख्नको लागि कुमाडिनमा हुँदा नियमित रूपमा भिटामिन के सेवन गर्नै पर्छ। Coumadin गर्भावस्था मा contraindated छ।
हेपेरिन-प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया १% देखि २% बिरामीहरूमा देखा पर्दछ र यो एक गम्भीर घटना हो जसले प्लेटलेटको विनाशमा पुर्‍याउँछ। यदि यसले समय मा समात्न सकेन भने यसले गान्ग्रीन र छाला नेक्रोसिस निम्त्याउन सक्छ।
अक्सर कुमाडिन बनाम हेपेरिनको बारेमा प्रश्नहरू
कुमाडिन भनेको के हो?
कौमाडिन एक मौखिक एन्टिकोएगुलेन्ट औषधि हो र शिरापरक थ्रोम्बोसिस र पल्मोनरी एम्बोलिजमको उपचार र प्रोफेलेक्सिसमा प्रयोग गरिन्छ। यो एट्रियल फाइब्रिलेशन र कार्डियक स्टेंट प्लेसमेन्टसँग सम्बन्धित थक्ने घटनाहरू प्रबन्ध गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया प्रति दिन एक पटक मुखले यो लिन्छ, र बिरामीहरूले उनीहरूको कुमाडिन खुराक उचित छ भनेर निश्चित गर्न नियमित आईएनआर निरीक्षण गर्नै पर्दछ।
हेपरिन भनेको के हो?
हेपेरिन एक एन्टिकोएगुलेन्ट ड्रग हो जुन अस्थायी रूपमा अस्पतालको सेटि .मा दिइन्छ। यो भेनिस थ्रोम्बोसिस र पल्मोनरी एम्बोलिजमको उपचार र प्रोफेलेक्सिसमा प्रयोग गरिन्छ। यो कार्डियाक र शिरापरक शल्यक्रिया प्रक्रियाको समयमा थक्ने कार्यक्रमहरू प्रबन्ध गर्न प्रयोग गरीन्छ। बिरामीहरूले सामान्यतया एउटा लोडि dose डोज प्राप्त गर्छन् त्यसपछि एउटा इन्फ्यूजन, जुन उपचारको आधारमा केहि दिनसम्म रहन सक्दछ।
के Coumadin र हेपेरिन एकै हो?
जबकि कौमाडिन र हेपेरिन दुबै एन्टीकोआगुलेन्ट औषधी हो, तिनीहरू समान छैनन्। कौमाडिन एक मौखिक पर्चा औषधि हो जुन प्राय: बाह्य रोगीहरूको सेटिंगमा प्रयोग गरिन्छ, जबकि हेपरिन एक इन्जेक्टेबल औषधि हो जुन सामान्यतया अस्पतालको सेटिंगमा प्रयोग गरिन्छ।
के Coumadin वा हेपेरिन राम्रो छ?
हेपरिनको कार्य सुरूवात कौमाडिन भन्दा धेरै छिटो छ तर लगातार इन्फ्यूजन वा लगातार इन्जेक्सनहरू पछि हुनुपर्दछ। त्यसकारण, हेपरिन सामान्यतया केवल अस्पताल सेटिंग मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कौमाडिनले प्रभावशाली हुन केहि दिन लिन सक्दछ तर बाहिरी रोगी सेटि settingमा लिन सुरक्षित छ। कुमाडिनमा बिरामीहरू नियमित रक्त परीक्षणको अधीनमा हुनुपर्दछ सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको आईएनआर उचित दायरामा छ।
के म गर्भवती हुँदा कौमाडिन वा हेपेरिन प्रयोग गर्न सक्छु?
कौमाडिनले गर्भवती महिलाहरूमा प्लेसेंटालाई पार गर्दछ र टेराटोजेनिक प्रभावहरू साबित भएको छ। कुमाडिन गर्भावस्थामा गर्भनिरोधात्मक हुन्छ, जबसम्म बिरामीको मेकानिकल हार्ट भल्भ हुँदैन वा थ्रोम्बोइम्बोलिक घटनाको लागि धेरै जोखिममा पर्दैन। हेपेरिनलाई गर्भावस्थामा दिन सकिन्छ किनकि यसले नालक पार गर्दैन, यद्यपि अधिकांश चिकित्सकहरू लोभ्नक्स (एनोक्सापेरिन) जस्ता गर्भावस्थामा कम आणविक तौल हेपरिन (LMWH) रुचाउँछन्।
म मद्दत गरी कोमाडिन वा हेपेरिन प्रयोग गर्न सक्छु?
Coumadin वा हेपेरिनको लागि रक्सीको प्रयोगको कुनै contraindication छैन। यद्यपि, रक्सीले केही बिरामीहरूमा हेपाटिक समारोहमा असर गर्न सक्छ, जसलाई कुमाडिन लिँदा INR को नजिकबाट निगरानीको आवश्यकता पर्दछ।
हेपेरिनको जेनेरिक नाम के हो?
हेपेरिन जेनेरिक नाम हो।
प्रोजाक बनाम ज़्यानाक्स: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नराम्रो रक्त शर्करा पढ्ने के हो
Zantac लिए पछि कति बेर म रक्सी पिउन सक्छु
संयोजन उपचार venlafaxine र bupropion साइड इफेक्ट
कसरी ibuprofen शरीर मा प्रशोधन गरिन्छ
तपाइँ कसरी नकारात्मक रगत समूह पाउनुहुन्छ?